» हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको शेयर २०७८ बैशाख ३१ गतेदेखि रोक्का, कहिलेबाट खुल्छ खरिद बिक्री, कति कायम हुन्छ शेयर मूल्य ?
१ माघ २०७८, शनिबार ०६:५२
काठमाडौं । आपसी मर्जरमा जाने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्जले २०७८ बैशाख ३१ गतेदेखि हिलमायन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको शेयर कारोबार रोक्का गरेको थियो । शेयर कारोबार रोक्का गरेसँगै लाखौं लगानीकर्ताहरुले उक्त बैंकको शेयर बिक्री गर्न पाएका छैनन् ।
हिजो सम्पन्न भएको हिमालयन बैंकको २९ औं बार्षिक साधारणसभाले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जर अस्वीकृत गरेसँगै मर्जर प्रक्रिया लगभग भाँडिएको छ । बैशाख ३१ गतेदेखि आठ महिनासम्म रोक्का रहेको शेयर कारोबार अब कहिलेबाट खुल्छ ? लगानीकर्ताहरुले चासो देखाइरहेका छन् ।
दोस्रो बाटो मर्जर प्रक्रिया भंग गरेर अघि बढ्ने । यो बाटोमा अघि बढेको खण्डमा केही महिनाभित्रैमा शेयर कारोबार खुल्नेछ ।